Diyaaradda Turkish Airlines Dreamliner ee Fasalka Ganacsiga Cusub ee New | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraDiyaaradda Turkish Airlines Dreamliner ee Fasalka Ganacsiga Cusub
02 / 12 / 2019 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, GUUD, Garoomada, WADADA, Headline, TURKEY, VIDEO
Diyaaradda Turkish Airlines
Diyaaradda Turkish Airlines Dreamliner ee Fasallada Ganacsiga Cusub; Boeing 787-9 oo leh noocyo dhaadheer, matoor mataano ah iyo jir ballaaran ayaa sidoo kale loo yaqaanaa Dreamliner. Maaddaama ay ka kooban tahay maadooyinkeeda sare, diyaaraduhu waxay leeyihiin qoyaan sare oo gudaha ah waxayna bixiyaan fudeyn raaxo leh ilaa dhamaadka. Waxaad ogaan doontaa in Boeing 787-9 ay leedahay daaqado aad uga weyn kan diyaaradaha kale ee rakaabka ah waxaadna dareemi doontaa deegaanka cusub ee deegaanka. Waxaad si nasasho leh ugu nasan kartaa kuraasta qolka ganacsiga, kaas oo loo rogi karo sariir aad u deggan oo boos dheeri ah leh.
Waxaan dib-u-habeyn ku sameynay jiilkeenna cusub ee duullimaadyada Boeing 787-9-ballaaran si ay si wanaagsan kuugu adeegeeyaan. Waxaan ugu talagalnay inaan safarkaaga ka dhigno mid aad u fiican oo leh nashqadeyn u gaar ah kuraasta, safka ballaaran ee kuraasta, codsiyada u fududeynaya adeegsiga kabadhka dusha sare, cutubyada keydka xiran, dekedaha USB iyo matoorrada. Intaa waxaa sii dheer, waxaan abuurnay naqshad indhahaaga ka raynaysa qurxinta u dhiganta astaanteenna sumadda Flow-Flow.
Ahaanshaha safar safar Fasalka Ganacsiga ee Dreamliner waa khibrad ka duwan kuwii hore
Waxaad noqon doontaa degganaan adoo u mahad celinaya 1 cm fogaan jilibka ah oo ay bixisay kuraasta 2-1-111 ee qolka Class Business. Waxaad sidoo kale u rogi kartaa kursigaaga sariirta dhererkiisu yahay 193 cm oo leh hal guji. Shaashadda '18-inch' waxay kugu martiqaadeysaa safar raaxo leh oo leh filimada ugu wanaagsan, taxanaha iyo muusikada.
Nooca Ganacsiga wuxuu muujinayaa xitaa faahfaahinta ugu fiican sida xakameynta taabashada, iftiinka aqriska iftiinka ee la hagaajin karo, aag kaydinta oo leh daboolka, qaybta korantada iyo dekedaha ku amraya USB. Waxaan kugu casuumeynaa safar cajiib ah oo leh özel Sunrise ee Kappadocia ”nalka si gaar ah loogu talagalay golaha wasiirada.
Boeing 787-9 waxay ballanqaadeysaa safar kaafi doona waxyaabaha aad ka fileysay
Diyaar u noqo fuul raaxo leh oo ku fadhida kuraasta ballaaran ee 3 cm, kuwaas oo lagu taxay liiska fasalka Dhaqaalaha sida 3-3-44. Waxaan ku darnay masaafada u dhexeysa 78 cm jilibka inta udhaxeysa kuraasta Dhaqaalaha si aad si raaxo leh ugu safarto sida aad rabto. Waxaan rabnay inaad si farxad leh ugu safarto Qolka Dhaqaalaha halkaasoo aan ku darno midab leh nalka ıyla Turquoise Waves ”.
Daaqadaha ugu ballaaran
Boeing 787-9 waxay leedahay daaqadaha ugu weyn fasalkeeda waxayna kordhisaa safarka.
Safarada nasashada ee nasashada
Kuraasta ku yaal qolka dabaqa meheradda ayaa loo rogi karaa sariir aad u deggan oo raaxo leh iyada oo loo mahadcelinayo boosas gaar ah.
Kuraasida qaaska ah
Calaamadeena ayaa kor u kaceysa "kuraasta Aurora ız waxay u egtahay qorrax dhaca. Kuraastayada cusub ee laba jibaaran ee la diyaariyey waxay siiyaan rakaabkeena rakhiis gaar ah.
Ogeysiiska Ugaarsiga: Rakaab ku safrayaasha gaariga Class Class ee Tareenka Sare ee Xawaaraha Sare
Ogeysiiska Qandaraaska: Badeecada Cateringka ah ee loogu talagalay rakaabka ee YHT Business Class Cars
Ogeysiiska Qandaraaska: Bixinta xirmada cuntada ee la siiyo rakaabka ee YHT Business Class Wagons
Codsiga fasalka ganacsiga ee tareenada Shiinaha
Rugta Ganacsi ee Meelaha Lagu Ciyaaro Rakaabka Sare ee Korontada
Montania Special Class Boutique Hotel Award ee Shirarka Fiican
Duullimaadyada Boeing 787-9